‘बानि ब्यवहार सुधारौं, दुरी कायम गरौं नत्र फेरी लकडाउनको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ’ – जोस भ्याण्डेलर::अर्थपूर्ण : अर्थ र सम्पूर्ण समाचार
काठमाडौं । नेपाल सरकारले लकडाउनलाई हटाएपछि संक्रमणको दर झनै बढ्ने संकेत देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यका लागायत देशका मख्य ठूला सहरहरुमा समुदाय स्तरमा संक्रमण देखा परेको छ । संक्रमण दर पनि बढ्दै गएको छ । लकडाउन खुलेसँगै मानिसहरुको आवागमन पनि बढेको छ । संक्रमितहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा संक्रमण फैलिने सम्भावना बढेको छ । यसलाई पछिल्लो समय समुदायमा संक्रमणका केसहरु देखिनुले पुष्टि गरेको छ । यति नै बेला सरकारले गलत समयमा लकडाउन गर्ने र गलत समयमा खोल्ने काम गरेको भन्दै आलोचना गर्नेहरु पनि धेरै छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा कोरोनाको अवस्था बारे कसरी हेरीरहेको छ । के नेपालमा महामारी फैलने खतराको संकेत देखा पर्न लागेको हो ? लकडाउन फेरी आवस्यक छ ? यीनै प्रश्नसहित विश्व स्वाथ्य संगठनका नेपाल प्रमुख डा. जोस भ्याण्डेलरसँग न्यूज एजेन्सी नेपालका संबाददाता सबिन धमलाले गर्नुभएको कुराकानी ।
साथै, लकडाउन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि विविधता रहेको छ । पूर्ण लकडाउन गर्ने कि आंशिक भन्ने विषयमा । के के कुरा चल्न दिने ? मेरो विचारमा, हामीले लकडाउनबाट के कुरा हासिल गर्न खोजेका हौं भन्ने विषय निर्धारण गर्दा यी सबै निर्णयहरू उपर ध्यान दिनुपर्दछ । लकडाउन विकल्प त हुँदै होइन । सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउन शुरू गर्दै गर्दादेखि नै हामीले आवश्यक परेमा पुनः लकडाउन गर्ने विकल्प हुनुपर्दछ भनेर भन्दै आएका छौं । लकडाउन सम्बन्धी निर्णय लिनु एक गाह्रो काम हो । यो स्वास्थ्य क्षेत्रसँग मात्रै सम्बन्धित निर्णय होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रले डोहो¥याउने निर्णय भने पक्कै हो ।
यदि महामारीको अवस्था छ भने, लकडाउनले भाइरसलाई फैलिनबाट रोक्छ । तर यसको अर्थतन्त्र, सामाजिक जीवन र अन्य पक्षमा अन्य धेरै प्रभाव हुन्छ । र यो सन्तुलनको विश्लेषण सरकाले गर्नुपर्दछ । त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने काम हामीले ग¥यौं भने, कडा वा लामो लकडाउनको आवश्यकता कम हुनसक्छ । यदि हामीले राम्ररी व्यवहार गरेनौं भने, सरकारले केही हदसम्मको लकडाउन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।